कपाल काटेरै विदेशमा भन्दा राम्रो कमाई गर्न सकिन्छ, किन जाने विदेश ? - बलराम पोखरेल | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७७ श्रावण ९ गते १०:५४
हामीले अझैं चाख लागेर सोध्यौं, तपाई कसरी व्यावसाय प्रति नै आर्कषित हुनुभयो ? उनले हास्दै जवाफ दिए, 'मैले अगाडि नै पनि भनी सके म पहिला बाट्ने अलि अलि यस्तो काम गर्ने भएको हुँदा । म मिति २०६६ सालमा एसएलसि दिएर काठमाडौं आए त्यसपछि धेरै कामको खोजी गरे तर पाइन, अलिपछि रङ लगाउने काम पनि गरे । त्यस्तो काम गर्दा निकै दुःख पाए उनले भने, एक दिन जना दाइ सङग चिन्जान भयो उहाँ संग गफ गदै जादा एउटा मेरो साथीको सैलुन छ काम गछौ ? भनुभयो यो काम मैले पहिला पनि गाउँ घरमा गरेको अलि अलि अनुभब भएको हुँदा पनि म तयार भए र हुन्छ भने । काम गर्ने ठाउँ मा पुगे पछी तीन महिना जति सिक्नु पर्छ भने पछी म तयार भए र सिके। पछि म यस्मा रमाउदै जान थाले आज सम्मपनि यहि पेसामा छु, खोही आकर्षित त येस्तै त होला नि ।'
कपाल काटेर राम्रै आमदानी हुने बताउदै पोखरेलले भने कमाइ ठिकै छ त्यति धेरै लगानी गर्नु न पर्ने हुनाले आफ्नो मेहनत अनुसार हुने भएको हुँदा कमाइ ठिकै भएको उल्लेख गरे । उनले भने, 'मैले आफ्नो परिवार पसल र घर भाडा याही बाटनै चलाएको छु भनेपछी तेती गाह्रो छैन कमाइ ठिकै छ।' मिहेनत गर्नेलाई जता पनि सम्भावना देख्ने पोखरेलले असम्भब भने कै छैन तर मिहेनती र आफू उर्जावान र सीप सिक्नमा अल्छि नमाने र मेहेनेती बन्ने हो भने भरपुर सम्भावना भएको बताए । उनले काम नपाएर भौतारिएर हिड्नु भन्दा यसमा धेरै राम्रो सम्भावना भएको सुनाए ।
कपाल काट्ने पेशामा बाहिरवाट हेर्दा जति सजिलो र सहज लाग्छ त्यति नै समस्या रहेको युवा पोखरेलले बताए । यस क्षेत्रका समस्याका बारे उनले भने, 'समस्या भनेको कहिले काहीँ अन्जानमा घाउ चोट लाग्छ कपाल अथवा दारी को डिजाइनमा कष्टमरले दिएको डिजाइनमा फरक आउँदा कष्टमर रिसाउने गर्छन् । किनभने आफूले कहिले नगरेको डिजाइन पनि काट्नु पर्ने हुन्छ यसमा कष्टमरहरु ले नबुझिदिने हुनाले सम्स्या हुन्छ । किनभने उहाँहरुले आफूलाई नकारात्मक टिप्पणी गाली गलौज सम्मेत गर्ने हुँदा र कहिले काहीँ पारिश्रमिक समेत न दिने हुनाले यसमा चाँहि एक समस्या नै हो ।' उनले अर्काकाे मन खुसि राख्नसक्नु त्यति सजिलो काम नभएको बताए ।
नेपालका पहाडी समुदायले यस्तो काम व्यावसायिक रुपमा खास गर्दैनन नि भनेर हामीले भन्न नपाउदै उनले जवाफ दिए, 'काम कहिले पनि सानो ठुलो र काम कहिँले जाती विशेष पनि भनु हुदैन । कामलाई हामिले सम्मान गर्नु पर्ने हुन्छ । जाती कै आधारमा हेर्न हो भने म पन्डित भएर पुजापाठ गर्नुपर्ने हो तर म पन्डित भइन् त ? किन कि म यो मान्यता राख्दिन । काममा पनि भेदभाब हुनु हुदैन भनेर नै मैले यो काम सुरुवात गरेको हुँ । मलाई पहिला पहिला त घर परिवारले नि भनु भयो यस्तो काम नगर भनेर पनि तर पछि मैले राम्रो गर्दै गए र परिवार लाई नि बुझाए र अहिले राम्रो छ, भनेर मेरो परिवार सवै खुसिछन।'
सैलुन ब्यबसायलाई नै अगाडि बढाउने उनको भावी योजना रहेको सुनाए । अब बिदेशीनु र अन्य काम मा लाग्नु भन्दा पनि मेरो यो ब्यबसाय लाई झन् ठुलो बनाएर नेपालका युवा लाई सीप सिकाइ रोजगारी दिएर नेपालमा नै राख्ने र आफ्नो पेशा लाई पनि राम्रो र दिगो आम्दानीको श्रोत बनाउने उनको योजना छ ।
नेपाली युवाहरुलाई उनले कपाल तथा दाह्री काट्ने काममा पनि राम्रै सम्भावना भएकोले यसमै आउन अनुरोध गरे । उनले भने, 'नेपाली दाजुभाइ बेरोजगार भएर बस्नु भन्दा यो पेशामा आउन म अनुरोध गर्छु। किनकि बाहिर देशबाट आएर नेपालमा काम गरि नेपाली पैसा बाहिर लगेका छ्न । यदि यो काम हामी नेपाली दाजुभाइले नै गर्ने हो भने हाम्रो देश को पैँसा हाम्रै देश मा राख्न सकिन्छ। रोजगार पनि बन्न सकिन्छ । बाहिर देश मा गएर दुःख पाउनु भन्दा आफनै देश मा केहि गर्न सकिन्छ ।'